Inhloko ZeNdaba Mabasa 30, 2022
Mabasa 29, 2022
*** Umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana walonyaka oweZimbabwe International Trade Fair 2022, koBulawayo namhlanje.
*** Inhlanganiso yeOperation Dudula ithi abokuza kwele South Africa akusamelanga bathengise imibhida lezithelo eSoweto.
*** Izikhamizi zaseHarare zikhala ngokuthi sezithwaliswe nzima ludubo lokusilela kwezimota zokuhambisa kulandela uhlelo lwamapholisa lokubopha izimota ezingabhaliswanga ukusebenzelana labenkampani kahulumende eye ZUPCO.
*** Kwezemidlalo………. Umqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi ukhathazekile ngabadlali bakhe abangezwa kuhle ngemva kokuhotsha intuthu ehitshayo ngempela viki eyedluleyo.
*** Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu le-rhumba elibizwa ngokuthi yiKhuluza & Injiva zamaSoviet Nkayi Sounds.
***KuLivetalk namhlanje sikhangela okwenzakala embukisweni wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair 2022 ovulwe okusemthethweni nguMongameli Emmerson Mnangagwa koBulawayo.